Mugabe defies calls for his ouster as African summit meets (Roundup) - Thaindian News
Mugabe defies calls for his ouster as African summit meets (Roundup)
July 2nd, 2008 - 1:04 am ICT by IANS Tweet
Sharm el-Sheikh (Egypt), July 1 (DPA) Zimbabwean President Robert Mugabe, at the centre of controversy over his disputed re-election, Tuesday challenged calls for his ouster, with his spokesman at the African Union summit saying that the West could “hang a thousand times”. Speaking to reporters as the two-day summit in the Egyptian Red Sea resort of Sharm el-Sheikh was drawing to a close, the presidential spokesman George Charamba said the West had no “basis, no claim on Zimbabwean politics at all”.
The octogenarian Mugabe has claimed victory against opposition candidate Morgan Tsvangirai in the election that was marred by widespread violence and condemned as unfair by African monitors.
Those remarks prompted Zimbabwe’s opposition Movement for Democratic Change (MDC) to toughen its stance, saying Mugabe’s one-man election June 27 had killed any chance of a negotiated agreement.
“The sham and catalyptic election 27 June 2008 totally and completely exterminated any prospects of a negotiated settlement,” MDC secretary-general Tendai Biti said in a statement, contrasting with remarks Monday by the party that it was “committed” to talks.
Sierra-Leone President Ernest Koroma urged African leaders to condemn Mugabe when they conclude the summit.